Chris Lucas Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Chris Lucas
Nongedzo yaMarketer yekuve Trust Trust kuyerera ™ Pro
Chipiri, January 5, 2016 Chitatu, Ndira 6, 2016 Chris Lucas
Makore maviri apfuura akaunza shanduko zhinji kushambadziro. Isu takaona mikuru inofamba ichienda kune nhare, drive nyowani yezvinhu zvine simba uye muchato pakati pezvemagariro nekutengeserana. Asi kumwe kwekushanduka kwesisitimu kwave kuri munzvimbo yeSEO. Muna 2013, John Mueller akazivisa kuti Google haichazovandudza PageRank (Toolbar PageRank), yayo sisitimu yekumisikidza mapeji eWebhu zvinoenderana nekukosha. Uye hazvina kudaro. Pane kudaro, tine sheriff mutsva
Mira Kuvaka Crappy Software - Yakabatanidzwa Software Zvichiri Kukunda
Chipiri, Gunyana 25, 2012 Chipiri, Gunyana 25, 2012 Chris Lucas
Hechino chimwe chinhu chemukati maCIO uye ako emukati matekinoroji matimu haadi kuti iwe uzive, iyo-18-mwedzi software yekumisikidza iyo inongokubhadharira iwe $ 500K - $ 1MM inogona kuitwa gehena yezvakawanda isingadhuri… uye inofanirwa kuve. Ivo vari kuvaka kuchengetedzeka kwemabasa nekuti vazhinji veC-level vatungamiriri nevashambadzi havanzwisise kuti tekinoroji inogona sei uye inofanirwa kushanda. Sevashambadzi isu tese tinoda iyo software yakafanana neunicorn. Iyo inotungamira chizvarwa, zvemukati zvisikwa, inotungamira zvibodzwa,
Dambudziko Ne "Hapana Komendi"
Chitatu, December 2, 2009 Svondo, October 4, 2015 Chris Lucas
Hapana Komendi rave riri gumbeze rinodzivirira iro makambani nevanhu vakashandisa senhovo pese panouya nhau dzakaipa kana kuongororwa kwevanhu. Munyika yekare umo midhiya yaitora kuburitswa sevhangeri uye uko makambani aikwanisa kudzora meseji Hapana Mhinduro yakashanda kutenga kambani imwe nguva. Nhasi, Hapana Komendi haishande. Bvunza Tiger Woods. Pamhepo pasocial media zvishandiso zvinobvumidza munhu wese kuti ataure. Zvinoreva kuti kana iwe kana bhizinesi rako
Hausi Sexy, Zvino Chii?
Chishanu, Mbudzi 20, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2012 Chris Lucas
Isu takamboita kuti mumwe munhu atitaurire kuti isu, kana kuti kumberi fomu rekuvaka fomu, raive risiri "seksikäs". Mune dzimwe nzira ndinofungidzira kuti munhu iyeye anga akarurama. Mafomu, pachawo haasi evanhukadzi, asi kune vanhu vanoashandisa uye vanovimba navo kuti vaunganidze dhata, ivo, kana vasingaite seksikäs, vakanaka chaizvo. Saka iwe, muridzi webhizinesi, mushambadzi, nezvimwewo, izvo zvine chigadzirwa kana sevhisi isiri "sexy" unozviita "sexy"? Pano
Dick's Sporting Zvigadzirwa Kutyaira Yemagariro Media neemail
Chipiri, Mbudzi 10, 2009 Muvhuro, October 8, 2012 Chris Lucas
Vhiki rapfuura ndakawana muenzaniso wakanaka weiyo chaiyo nzira isinga nyatso kushandisa kushambadzira kweemail senzira yekutyaira traffic kune vezvenhau. Iyo email yakabva kuDick's Sporting Goods. Yakanga iri yakapusa, yakanyatsogadzirirwa email iyo yaive neyakareruka kufona ku chiito: Titevere pa Twitter uye ugamuchire yakasarudzika kodhi kodhi: Sei zvakanaka Dick vakaita basa rakanaka rekushandisa chinyakare chishandiso, email kushambadzira, kutyaira traffic ku